Mobile devices | November 2019
Android ပေါ်မှာမှားယွင်းနေသည် com.android.phone - ဘယ်လို fix မှ
Android စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ဘုံအမှားတွေတစ်ခုမှာ - ခေါ်ဆိုသည့်အခါ "com.android.phone application ကိုအမှားခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်" သို့မဟုတ် "com.android.phone လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန်" ဖြစ်ပေါ်, စည်းကမ်းအတိုင်း, တစ်ခါတစ်ရံ, dialer ကိုပဌနာ - မင်းထက်။ အမှား com.android ပြင်ပေးဖို့ဘယ်လိုဒါတွေကညွှန်ကြားချက်အသေးစိတ်။
အန်းဒရွိုက်6- နယူးကဘာလဲ?
တစ်ပတ်အကြာ, စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ၏ပထမဦးဆုံးပိုင်ရှင်တွေက Android Marshmallow6ဖို့ update ကိုလက်ခံရရှိရန်စတင်ခဲ့ပြီ, ငါအရမ်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိ, ငါမကြာမီကြောင့်အများအပြားစက်ပစ္စည်းအသစ် Sony, LG, HTC နှင့် Motorola ကမှလာရမယ်, မှတပါး, ထို OS ကို၏ features အသစ်အချို့ကိုဝေမျှဖို့အလျင်အမြန်။ ယခင်ဗားရှင်းအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကိုအကောင်းဆုံးကြဘူး။
Android ပေါ်မှာအထုပ် parsing နေစဉ်အမှား
Android ပေါ်မှာလျှောက်လွှာ apk ကို install တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့စေခြင်းငှါပြဿနာတွေတစ်ခုမှာ - ကို Message: "Syntax မှားယွင်းနေသည်" - အမှား Ok တစ်ခုတည်းခလုတ်ကိုအတူ packet ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆန်းစစ်ကြသောအခါ (အမှားခွဲခြားစိတ်ဖြာမှုအထုပ် parsing မှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည် - အင်္ဂလိပ်အင်တာဖေ့စ၌တည်၏။ ) ။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသိသာမကျမည်အကြောင်းနှင့်, ထို့ကွောငျ့, အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။
မှားယွင်းနေသည်လျှောက်လွှာရပ်တန့်နေသည်သို့မဟုတ် application ကို Android ပေါ်မှာရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်
Application တစ်ခုရပ်တန့်သို့မဟုတ် (ထိုဖြစ်စဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီ, ကံမကောင်းစွာလည်းဖြစ်နိုင်ပါ) "ကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါ app ကိုရပ်တန့်" ကြောင်းဖော်ပြတဲ့သတင်းစကား - သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါသင်ကြုံတွေ့ရအံ့သောငှါပြဿနာတစ်ခုမှာ။ အမှားက Samsung ဖုန်းများပေါ်တွင်အန်းဒရွိုက်၏အများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း, Sony Xperia, LG Lenovo က, Huawei နှင့်အခြားသူများကိုမှာသူ့ဟာသူကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်ပါတယ်။
မှားယွင်းနေသည် RH အ-01 က Android ပေါ်မှာ Play Store ကိုမှဆာဗာကနေဒေတာတွေကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံသောအခါ - Fix ရန်ကဘယ်လို
Android ပေါ်မှာအသုံးအများဆုံးအမှားအယွင်းများတစ်ခုမှာ - ကဆာဗာကို RH အ-01 ကနေဒေတာတွေကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံအခါ Play Store မှာတစ်ဦး bug ကို။ အဆိုပါအမှားန်ဆောင်မှုကို Google Play ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှင့်အခြားအချက်များ, အ firmware ကို၏မမှန်ကန်ကြောင်း system setting များကိုသို့မဟုတ် features တွေ (Custom ROM ကို emulator နဲ့ Android သုံးပြီး) နိုင်ပါတယ်။
အိုင်ပီ-စောင့်ကြည့်ကင်မရာအဖြစ်က Android ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျဆိုပါကကျွန်မဟောင်းအသုံးမပြုတဲ့ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက် (ထိုကဲ့သို့သောကျိုးမျက်နှာပြင်ကဲ့သို့) စမတ်ဖုန်းများအလုပ်လုပ်သည်မရှိသည်အဖြစ်, ထိုသူတို့အဘို့ပြုလုပ်အသုံးဝင်သော applications များနှင့်အတူတက်လာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ - ရဲ့ IP Camera ကိုဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်အဖြစ်သင့် Android ဖုန်းကိုအသုံးပြုပါ။ အဘယ်အရာကိုအဆုံး၌ဖြစ်ပျက်ရန်လိုအပ်ပါသည်: တစ်အခမဲ့ IP-ကင်မရာစောင့်ကြည့်, တဂျရှိသည် frame ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် activated အပါအဝင်, အင်တာနက်ကတဆင့်ဖြစ်နိုင်သည့်ပုံကိုကြည့်ပါရန် - cloud storage အတွက်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်အတူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကျမ်းပိုဒ်။
သင့်ရဲ့တက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းပေါ်မှာမှားယွင်းနေသည်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်း Wi-Fi ကို
ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာစကားလုံးက "သိမ်းဆည်း, WPA / WPA2 ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" - သင်က Wi-Fi ကိုရန်သင့်မှာ Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်း။ ဤဆောင်းပါး၌ငါစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါအဘယျသို့အဖြစ်, သင်၏ Wi-Fi ကို router ကိုဖြန့်ဝေရန်, အင်တာနက်ကိုအတူတူချိတ်ဆက်ရန်လမ်းကိုသိသောအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Fix ရန်ကဘယ်လို - အန်းဒရွိုက်မှတ်ဉာဏ်ကဒ် Micro SD မမြင်ရပါဘူး
အန်းဒရွိုက်ရိုးရိုးကဒ်ကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ် (SD က-card ကိုစက်ကိုပျက်စီးနေသည်) ကို SD က-card ကိုအလုပ်မလုပ်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုမပြပါဘူး - သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအတွက် Micro SD ကဒ်ထဲထည့်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာများ၏တဦးတည်း။ ဒီလက်စွဲ, ပြဿနာရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းတရားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်နှင့်မည်သို့မှတ်ဉာဏ်ကဒ်သင့်ရဲ့ Android device ကိုနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်, အခြေအနေဆိုးအားပြုပြင်ရန်အတွက်။
အန်းဒရွိုက် overlay ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ
ဖုန်းများနှင့် tablet များကို Android 6.0 Marshmallow ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့အတူရင်ဆိုင်ဖြစ်လာကြပါပြီအတူစတင်ခြင်းနိုင်ရန်အတွက်ပေးသနားသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခွင့်ပြုချက်ကိုအရင်ထပ်ကို turn off, "View က Settings" ကိုနှိပ်ပါမှမက်ဆေ့ခ်ျကို "overlay ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ" ။ အမှားက Android 6, 7, 8 နဲ့9ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, ကမကြာခဏ devices တွေကို Samsung, LG Nexus နှင့်ပစ်စယ်လ်တွင်တွေ့သည်ကို (သို့သော်ယင်းစနစ်၏သတ်မှတ်ထားသောဗားရှင်းနဲ့အတူအခြားအစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ) ။
Samsung က Dex - နဲ့ငါ့အတှေ့အကွုံ
Samsung က DeX - ဖုန်းများကို Samsung ရဲ့ Galaxy S8 မှာ (S8 မှာ +) ၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုသည့်စီးပွားဖြစ်နည်းပညာ၏အမည်, က Galaxy S9 (S9 +), Note ကို 8 နဲ့9မှတ်ချက်, ကွန်ပျူတာအဖြစ်တက်ဘလက် Tab ကို S4 ကိုသည်အတိုင်း, သင့်လျော်သောအထိုင်နှင့်အတူ (အသင့်လျော်နဲ့ TV) ကမော်နီတာက connect -Station DeX ဘူတာသို့မဟုတ် DeX Pad အဖြစ်ရိုးရှင်းတဲ့ cable ကို USB မှတ်-C မှာ - HDMI (သာက Galaxy Note ကို9နှင့်တက်ဘလက်က Galaxy Tab ကို S4 ကို) ။
ငါက Android ဖို့မေ့ထားတဲ့ပုံစံ, သော့ဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ပုံစံကိုမေ့နေနှင့်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ - စမတ်ဖုန်းနှင့် Android tablet များ၏အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကပေးသော, ပြဿနာကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒီလမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာငါက Android နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုအပေါ်သော့ဖွင့်သော့ဖွင့်ဖို့အားလုံးကိုနည်းလမ်းတွေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အန်းဒရွိုက် 2.3, 4.4, 5.0 နဲ့6ဗားရှင်းသက်ဆိုင်။
သင့် Android ဖုန်းကိုပြန်ရန်သင့်ကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို
တကယ်တော့ကျွန်မဖုန်းကိုဤဆောင်းပါးလွှဲပြောင်းဖိုင်တွေအဖြစ်, တစ်စုံတစ်ဦးကမှအသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမသိရပါဘူးများသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့်ဆောင်းပါး၏သင်တန်း၌အကြောင်းကိုရေးဖို့ဝံ့အောက်ပါအမှုအရာအကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်: USB ကတဆင့်ဝါယာကြိုးကျော်ဖိုင်တွေကိုပို့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဖိုင်တွေ (အချို့မော်ဒယ်များများအတွက်) က Windows XP မှာဖုန်းမှကို USB ကနေတဆင့်လွှဲပြောင်းကြသည်မဟုတ်။
Store ကို Google Play မှ apk ဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
တခါတရံသင်သည် Store ကို (နှင့်မရသာ) ကို Google Play ကနေကွန်ပျူတာထဲမှာ apk ကို Android application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လိုအပျစေခြင်းငှါ, ရုံ emulator က Android ကိုထည့်သွင်းဖို့, ဥပမာ, app ကို store မှာခလုတ် "Install" ကိုနှိပ်ဘူး။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင်သည်လည်း Google ကနှင့်အတူစီတန်းလျှောက်လွှာများ apk ယခင်ဗားရှင်းမဟုတ်ဘဲနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ငါမကြာသေးမီက Android ကိုမှအရံပစ္စည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းရေးထားသည့်ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်ယခုမူကားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်စဉ်ကိုအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့: တစ်ကီးဘုတ်, မောက်စ်သို့မဟုတ် Joystick အဖြစ် Android ဖုန်းများနှင့် tablet များအသုံးပြုခြင်း။ ကျွန်မဖတ်ဖို့အကြံပြု: ဆိုက်က Android ဆောင်ပုဒ်ပေါ်မှာရှိသမျှဆောင်းပါးများ (Remote Control ကို, Flash ကို, ကွန်နက်ရှင် devices များ, etc) ။
Bliss OS ကို - တစ်ဦးကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android ကို 9
အစောပိုင်းကငါ ( "အထဲမှာ" လက်ရှိ OS ကို run သော, အန်းဒရွိုက် emulators ဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် full-စုံတဲ့ operating system အဖြစ်ကို Android installation ကိုစွမ်းရည်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် site တစ်ခုပေါ်မှာ။ ဤနေရာတွင်အသေးစိတ်သကဲ့သို့သင်တို့က, x86 သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် PC နဲ့မှတ်စုစာအုပ် Remix OS အတွက် optimized စင်ကြယ်သော Android ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်: သင်၏ laptop ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android ကို install လုပ်နည်း။
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ Android tablet ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းမှတစ်ဦးကီးဘုတ်, မောက်စ်နှင့် Joystick ချိတ်ဆက်ဖို့
Google က Android ကို operating system ကို mouse ကို, ကီးဘုတ်နှင့်ပင်ဂိမ်းဆော့ခလုတ် (ဂိမ်း Joystick) ၏အသုံးပြုမှုကိုထောက်ခံပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်, Tablet နှင့်ဖုန်းအတော်များများ devices တွေကိုသင်က USB သုံးပြီးအရံပစ္စည်းကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပေးမပေးကို USB ကိုသုံးပါရာအချို့သောအခြား devices များအတွက်, သငျသညျဘလူးတုသ်ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
တက်ဘလက်နှင့်ဖုန်းနှင့်အတူ router ကိုတက်ချိန်ညှိခြင်း
သင်သည်အဘယ်သို့သင့်မိုဘိုင်း device မှအင်တာနက်တစ်ဦးက Wi-Fi ကို router ကိုဝယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကဖွင့်လှစ်မယ့်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုမရှိဘူးဆိုရငျကော တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, မည်သည့်ညွှန်ကြားချက်ကိုသင်က Windows ပြုနိုင်အောင်ပေါ်တွင် browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါနှင့်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူစတင်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့, Router ကိုအလွယ်တကူ Android နဲ့အိုင်ပက်တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းနှင့်အတူထူထောင်နိုင် - အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် Apple က iPhone အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Android အတွက် RAR
ထိုကဲ့သို့သောကို Windows ပလက်ဖောင်းများအတွက်ရေပန်းစား Archiver WinRAR အဖြစ်ဆိုင်းဘုတ်များအများစုဟာ။ , သုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေမှုနှင့်အခြားမော်ကွန်းတိုက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်: ယင်း၏လူကြိုက်များနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားဖို့ထိုင်ခင်မှာအန်းဒရွိုက်အကြောင်းကိုအားလုံးဆောင်းပါးများ (အဝေးထိန်းဘယ်လိုသော့ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ကို) :. ကိုလည်းကြည့်ပါ, ထိုစာရင်းဇယားရှာဖွေရေးန်ဆောင်မှုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်များစွာသော Android အတွက် WinRAR ရှာနေဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသည်။
သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ်အန်းဒရွိုက်တက်ဘလက်ကနေသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်က iPhone နှင့် iPad လုပ်နည်း
နှစ်ရက်အကြာကျွန်ုပ် TeamViewer ဆော့ဖျဝဲ၏သုံးသပ်ချက်ကိုရေးသားခဲ့သည်သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောနေရာတစ်ခုကနေဆာဗာများနှင့်အခြားအမှုအရာအပြေးသည်ဝေးလံခေါင်သီ desktop ကို ချိတ်ဆက်. နှင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်သည်လျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများသည်ပြဿနာတစ်ခုခုနှင့်ကြုံတွေ့ဖြေရှင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ files တွေကို access လုပ်ဖို့ကိုကူညီခွင့်ပြုပါတယ်။
အန်းဒရွိုက်5Lolipop - ငါ့အပြန်လည်သုံးသပ်
ယနေ့တွင်ကြှနျုပျ၏ Nexus5ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်အန်းဒရွိုက် 5.0 Lolipop တစ်ခုအဆင့်မြှင့်ရဲ့နဲ့ကျွန်မအသစ်က operating system ကိုမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြည့်ဝေမျှဖို့အလျင်အမြန်။ ကိုယ့်အမှု၌: အ update ကိုစက်ရုံတွင် settings ကိုမှပြန်လည်သတ်မှတ်မှုခဲ့မတိုင်မီစတော့ရှယ်ယာ firmware ကိုအတူဖုန်းကို root မလိုဘဲ, သငျသညျအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ, စင်ကြယ်အန်းဒရွိုက်ရှိသည်။ ။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: နယူးအန်းဒရွိုက်6function ကို။